စာမရီ (Wild Yak)
Distribution of wild yak
ထို့ပြင် စာမရီ သားကောင်သည် ဘေးအန္တရာယ်နှင့် ကြုံတွေ့သည့်အခါ အမွေးအမျှင်ကို တစ်ပင်မျှလျှင် အကျွတ်မခံဘဲ၊ အသက်ကို စွန့်၍ ကာကွယ်တတ်သော သတ္တိထူးရှိကြောင်းကိုလည်း ဖွဲ့နွဲ့စပ်ဆိုလေ့ ရှိကြသည်။ အထက်ပါ ပါရမီတော်ခန်းပျို့၌ပင်
↑ Buzzard, P. (2016). "Bos mutus". IUCN Red List of Threatened Species 2016. IUCN.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စာမရီ&oldid=716532" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။